Ukuphola okuphakathi kunye nabavelisi kunye nabathengisi
Military sifihle okungangenwa epholileyo Soft
Umgangatho wezomkhosi wokufihla ngaphandle iphakethe yemisebenzi emininzi. Umthamo omkhulu weetoti ezingama-26. Izinto ezikumgangatho ophezulu ze-900D-TPU. Iindlela ezahlukeneyo zokuthwala. Ukufakwa kwamanzi kunye nokufudumeza kobushushu, isitayile kunye nokuphatheka, kufanelekile kwiimeko ezahlukeneyo. Ukukhempisha, ipikniki, inyama yebhasi, imoto, njl., Kunye nemisebenzi eyahlukeneyo.
Ingxowa ebandayo epholileyo engenamanzi epholileyo
Iqinile, ayinamanzi, inamanzi kwaye kulula ukuwaphatha ziimpawu zayo. Iyakwazi ukuhlangabezana neemfuno zokuthwala ukupholisa. Ukuvulwa okubanzi kulungele ukuthatha ukutya, kunye nokusebenza okuphezulu kokugcina ubushushu kunokugcina ukutya kukutsha kangangeeyure ezingama-72.
Umgangatho ophezulu webhegi epholileyo engenamanzi
Ipakethe yomkhenkce ongaphandle manzi. Izinto ezingangeni manzi ze-840D-TPU, umthamo olinganiselweyo weetoti ezingama-30, kunye nomzimba ongwevu ongagugiyo. Vumela i-BD-001-36 ice pack ibe yeyona iqabane lakho lithembekileyo kwiipiknik ngaphandle, ukuphuma kunye nokukhempisha.
Umgangatho ophezulu opholileyo ongenamanzi opholileyo ongenamanzi opholileyo onamandla aphakathi, i840D-TPU izinto, iitoti ezingama-20 zomthamo, ezaneleyo ukubeka ukutya okwenyani, iziselo, iziqhamo ozifunayo, kwaye wonwabele iBD-001-41 yakho eshushu ngaphandle Ukonwaba komkhenkce kuletha.
Yangaphandle Manzi ukufihla kupholile Bag
Ingxowa yefashoni yomkhenkce enenkangeleko yokuzifihla, kodwa ikwanomgangatho wezomkhosi. Sebenzisa i-900D-TPU yokusebenza okuphezulu okungangeni manzi, kunye namazinyo erabha uziphu ngokusebenza ngokugqwesa okungangeni manzi. Itanki engaphakathi nayo ingangenwa ngamanzi.
Ukupholisa Ukutya okungaphandle kwamanzi
Izinto ezikumgangatho ophezulu ze-900D-TPU, amandla aphakathi eenkonkxa ezingama-24. Ukuhlala ixesha elide, ukungangeni manzi, kunye nokuphatheka zonke ziimpawu. Iyakwazi ukuhlangabezana neemfuno zeefriji zangaphandle. Ukuvulwa okubanzi kulungele ukuthatha ukutya, kunye nokusebenza okuphezulu kokugcina ubushushu kunokugcina ukutya kukutsha kangangeeyure ezingama-72. Masitye ukutya okutsha nokubandayo ngaphandle.
Ngaphandle Ingamanzi kupholile
Ipikniki yangaphandle yesiselo somkhenkce. Umthamo omkhulu weetoti ezingama-26. Izinto eziphezulu ze-840D-TPU. Iindlela zokubamba ngesandla ezibanjwa ngesandla esinye. Ukufakwa emanzini nokungabikho kobushushu, isitayile kunye nokuhlala ixesha elide, kufanelekile kwizihlandlo ezahlukeneyo, inkampu, ipikniki, ibarbecue, imoto, njl.
Iplastiki yamazinyo Zipper okungangenwa okupholileyo Ingxowa
Iitoti ezingama-20 zesikhwama esipholileyo se-TPU, sisebenzisa amazinyo erabha akumgangatho ophezulu, amanzi angangeni manzi, ukugcinwa kokutya kangangeeyure ezingama-72. Ingasetyenziselwa ukuphatha ukutya kwaselwandle, iziqhamo, iziselo kunye namayeza. Dlala indima enkulu kwiipikniki, ukuhamba intaba, ukwenza inkampu kunye neminye imisebenzi.
Xa igqunyiwe Bag Soft kupholile
Izinto ezikumgangatho ophezulu ze-840TPU, amandla aphakathi, afanelekileyo ngezihlandlo ezahlukeneyo. Nokuba uyipikniki, unenkampu okanye uyosebeyitha emva kwendlu, uyakufuna ibhegi epholileyo efanelekileyo.